Tesla ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ ကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး လစာရရှိ - Yangon Media Group
Tesla ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ ကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး လစာရရှိ
Tesla ကုမ္ပဏီ အစုရှယ်ယာရှင်တို့က ကုမ္ပဏီအလုပ်အမှုဆောင်အကြီးအကဲ အီလွန် မတ်ခ်အတွက် ကြီးမားသောခံစားခွင့်လစာငွေပေးရေးကို သဘောတူထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အီလွန်မတ်ခ်ရရှိသည့်လစာမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီသမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး အစုရှယ်ယာကို အခြေခံသည့် လစာငွေပေးရေး သဘောတူညီမှုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ Tesla ကုမ္ပဏီအနေနှင့် အရောင်းနှင့် ရှယ်ယာဈေးနှုန်းကဲ့သို့သော မက်ထရစ်စနစ်နှင့် ဆက်စပ် နေသည့် ရည်မှန်းချက်များ ပြည့်မြောက်ပါက မစ္စတာမတ်ခ်က ကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိရှယ်ယာများကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မစ္စတာမတ်ခ်အားပေးမည့် အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးကို အချို့သောအစုရှယ်ယာရှင်ကြီး များက ထောက်ခံသော်လည်း ထင်ရှားသောအကြံပေးအုပ်စုကမူ အဆိုပါပေးမည့် အစု ရှယ်ယာမှာ ရက်ရောလွန်းနေကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့သည်။ မစ္စတာမတ်ခ်သည် လျှပ်စစ် မော်တော်ကားကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Tesla ၏ အစုရှယ်ယာ ငါးပုံ တစ်ပုံကို ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီး မစ္စတာမတ်ခ်အားပေးမည့် အစုရှယ်ယာတန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်၍ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မည့်အစီအစဉ် ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် ကုမ္ပဏီက အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်း ၃ ရာခိုင်နှုန်း ခုန်တက်သွား ကြောင်း သိရသည်။
သထုံမြို့ရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ရုံတွင် ရေတွင်းဆယ်ယူရာမှ အမျိုးသားနှစ်ဦး အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ေ??
မြန်မာလုပ်သားအများဆုံးရှိရာ စမွတ်ဆာခွန်ခရိုင်အတွင်း ထိုင်းအာဏာပိုင်များ စီမံချက်ဖြင့် ??